MUUQAAL: Qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho iyo Khasaaraha ka dhashay | Entertainment and News Site
Home » bulshada » News » xogwaran » MUUQAAL: Qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho iyo Khasaaraha ka dhashay
MUUQAAL: Qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho iyo Khasaaraha ka dhashay
daajis.com:- Faah faahin ayaa ka soo baxaya Gaari waxyaabaha qarxa ka buuxay oo saaka barqadii ku qarxay degmada Wadajir, kaddib markii ciidamada ammaanka ay hareereeyeen.
Gaariga qarxay ayaa waxaa la sheegay in markii hore ay ka shakiyeen ciidamada ammaanka, kaddibna ay isku dayeen inay qabtaan labo dhalinyaro oo saarnaa, waxaana markii dambe baxsaday labadii dhalinyarada.
Guddoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulle ayaa sheegay in gaariga markii hore laga shakiyay, markii ciidamada amniga ay qabteen lagu arkay in waxyaabaha qarxa saaran yihiin.
Waxaa uu sheegay in dadkii deegaanka lagu wargeliyay inay ka fogaadaan, si aanay waxyeelo u soo gaarin dadka rayidka ah, hase ahaatee waxaa uu xusay intii rayidka laga bad baadinayay ay ciidamada ku waxyeeloobeen.
Ciidamo ka mid ahaa kuwa miino baarista oo ku howlanaa kala fur furida qaraxa gaariga ayaa waxaa ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac, waxaana ku dhintay sarkaal u tababarnaa dhanka miino baarista.